Isiseko esikhethiweyo. Ininzi yethu yenza impazamo nangona kuthengwa, ukujonga umthunzi wempendulo emva kwesandla okanye isandla. Enyanisweni, le mveliso ivivinywa emini, isebenzise imveliso ecaleni kwinqanawa: yile ndlela onokuyiqonda ngayo ithoni yakho efanelekileyo.
Khetha ngokukhethekileyo isiseko
Ukugqithisa ngokwemvelo kwiidama. Isizathu silele kwisicelo esiphosakeleyo sokuphazamiseka: ngokubasebenzisa kwisicatshulwa setyhula, sinomngcipheko wokuba singqongqo kunye nokungaqhelekanga. Ukuba awufuni ukuba ukugqithisa kwakho kubonakale ngathi kukungabikho komzimba, thayipha imali kwi-brush edibeneyo uze udwebe umgca odibeneyo ngaphantsi kwendawo ephakamileyo ye-cheekbone. Emva koko mthungele ngomoya omncinci ngemivimbo emfutshane, "welula" phantsi.
Ubuchule obuchanekileyo bokusebenzisa ukugqithisa kukuyimfihlo yenkalo efanelekileyo
Iifayili "ihamba", ishiya amanqabana? Inokwenzeka ukuba, awugcini nje ngokungahambisani ne siseko, kodwa wasebenzisa imali eninzi kakhulu. Zininzi izisombululo: ungagubungeli ubuso obuphela kunye nekhilimu okanye i-fluid - indawo ehlukeneyo nje, sebenzisa iiponji ezimanzi zokufakela i-filigree kwaye ungakhohlwa malunga ne-primer.
Iintlobo ezininzi zeetoni zithetha - isizathu sokungalingani
Amabala amnyama phantsi kwamehlo - akusoloko ebonakalisa isidumbu esilungileyo: mhlawumbi uyaphulaphula ikhefu lezantsi. Gwema ukuthungca ngezithunzi - endaweni yoko, upende ikhefu eliphakathi kunye ne-liner eqinile okanye i-liner.
Musa ukusebenzisa izithunzi ukuze unciphise ijwabu leso
Iimvunzi zikaSatan ziyi-tab ye-make-up. Abagcini nje ukuba bangene kwisithuba senkulungwane, kodwa bahlala beshiya ubuso babo bonke ubuso. Basebenzise njenge-highlighter kwiinkalo zangaphakathi zamehlo kunye nomgca phantsi kwe-eyebrow-ngoko uya kufaka ukubonisa ukujonga.
Musa ukusebenzisa izithunzi nge-shimmer kwi-ilepidi ehambayo
Ukwenza kunye nezakhe zezinwele zesikolo imihla ngemihla
Unokukunceda njani umntu ukhethe isipho?
Isaladi ye-tangerines kunye ne-ginger sauce
Unyango lwe-amblyopia kubantwana